Wasiir Xoosh oo mar kale baraha Bulshadda ka soo muuqday isagoo u gafaya Baarlamaanka Somalia. – Hornafrik Media Network
Wasiirka Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Somalia, Cabdi Xoosh ayaa mar kale ka soo muuqday Baraha Bulshadda isagoo u gafaya Baarlamaanka Somalia oo uu ku tilmaamay inay yihiin Tuugo. Wuxuuna dhalinyaro isaga ku fikira ku bogaadinayay inay la dagaalamaan waxa uu ugu yeeray Tuugadaasi.
Wasiir Xoosh ayaa horay ugu eedeeyay Baarlamaanka inay sharciga ku xud gudbayaan oo aysan awood u lahay inay hor istaagaan Amar ka soo baxay Maxkamadda Sare ee Dalka, kadib markii ay diideen in dib loogu laabto Doorashadda 8 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka. Waxayna arrintaasi sababtay inay Baarlmaanku dalbadaan inuu hor yimaado Wasiir Xoosho oo ugu dambayn ka cudur daartay inuu hortago, isagoo codsaday in dib loogu dhigo illaa August.
Baarlamaanku ma aysan aqbalin Codsiga Wasiirka, waxaana la amray in dib u eegis lagu sameeyo Xilka Wasiir Xoosh oo ay dhici karto in Kalsoonidda lagala laabto. iyadoona Dastuurku uu fasaxayo in Baarlamaanku ay 1 Wasiir iyo ka badanba Kalsoonidda kala laaban karaan.
Dawladda Somalia oo sheegtay inay bixiyeen Amar lagu Dilay Sarkaal Sare oo ka tirsanaa Alshabaab.